जातको प्रश्न–२ : यस्ता छन् पाँच सेलिब्रेटीका फरक-फरक अनुभव - Khula Patra
प्रकाशित समय: २१:१२:०६
त्यस्तो ठाउँ भेटेको छैन, जहाँ विभेद नहोस्
– मोहना अन्सारी, मानव अधिकारकर्मी
कहिलेकाँही त लाग्छ, यो जातको बहसमा जोडिन नै नपरोस् । तर, अहिले फेरि हामी त्यही अभियानमा छौँ । खासमा त्यस्ता कुराहरु म सम्झिननै चाहदिनँ । म मेरो समुदायबाट यहाँसम्म पुग्ने पहिलो व्यक्ति हुँ होला सायद । मैले त्यही विभेद खेपेँ । खेप्न बाध्य भएँ । अहिले पनि विभेदको महसुस हुन्छ । आफु विभेदमा परेको भन्न छोड्नुस् भनेर धेरै भन्नुहुन्छ । तर मैले त दोहोरो तेहोरो विभेदको शिकार हुनुप¥यो । अझै मैले पितृसत्ताको तापमा सधैँ जेलिरहनुप¥यो । मलाई लाग्छ, मानव जीवनको उत्पत्ति नै ….! खान र सुत्न त सबैले जानेका छन् । र, खाने र सुत्नेमात्रै यदि जीवन हो भने अरु केही पनि चाहिदैन होला सायद ।
दलितको मात्रै मुद्धा हो भनेर गैरदलितहरु हात बाँधेर बस्न मिल्दैन’
म चाँहि माइलो समुदायको हुँ भन्ने लाग्थ्यो
जातको आधारमा गरिने विभेद एउटा समुदाय वा जातको मात्रै चासोको विषय होइन । जब हाम्रो समाजमा जातकै आधारमा विभेद गरिन्छ भने त्यो हाम्रो समाजको ठूलो समस्या हो । यो अहिलेदेखि भइरहेको प्रक्रिया पनि होइन । यो लामो छ । मैले सानै उमेरदेखि यो विषयमा सून्दै भोग्दै गर्दै नै आएँ । मैले बारम्बार भन्दै आएको पनि छु । म चाँहि माइलो समुदाय हो भन्ने लाग्थ्यो । मेरो समाजका हुकाई पनि त्यसैगरी भयो । किनभने मभन्दा माथिल्लो जात छ, जसले मैले छोएको खाँदैन । र मभन्दा तल्लो एउटा जात छ, जसले छोएको मैले खानुहुदैन भन्ने समाजमै हुर्किएको मान्छे हुँ म । मैले पनि यसरी जातीय विभेद भोगेको छु । यो म लुकाउँदिन पनि ।
यो त परम्परागत हो । यो विस्तारै परिवर्तन हुदै जान्छ भन्ने हाम्रो सोच छ । तर, विस्तारै भनेको कहिले हो ? कति लामो समय हो ? कहिले हुन्छ त विभेदको अन्त्य ? यो कुराले चाँहि मलाई सधै छुन्छ । यो विषयमा लकडाउनका समयमा झन् धेरै घटनाहरु बाहिर आए । यी घटनाहरुले समाजमा यो समस्या कसरी जकडिएर रहेको छ भन्ने कुरालाई उजागर ग¥यो । अहिले अन्तरजातीय विवाहमा एकदमै ठूलो समस्या रहेछ । मैले त्यस्ता कथाहरु नै सुन्ने र अनुभुत गर्ने मौका पाएँ । जो भोगेर मैले उहाँहरुको कथा सुनेँ । यो त बास्तवमै जटिल कुरा रहेछ । यो विषयमा घरघरमा कुराकानी हुनुपर्छ । छलफल हुनुपर्छ । जातको आधारमा जुनसुकै विभेदहरु अन्त्य हुनुपर्छ । यो चासो सबैको हुनुपर्छ । किनभने हामीले समाजलाई स्वास्थ्य र संमृद्धि समाजको परिकल्पना गरेका छौँ, त्यसकालागि यो सबैको चासोको विषय हो भन्ने लाग्छ ।
आफुलाई महान् बनाउन थरमात्रै फेरे पुग्नेरहेछ
निश्मा ढुंगाना चौधरी, सञ्चारकर्मी
म निश्मा चौधरी । म थारु समुदायको हुँ । थारु समुदायलाई कसरी हेरिँदो रहेछ भने प्रष्ट नेपाली पनि बोल्न नसक्ने । प्रष्ट अंग्रेजी पनि बोल्न नसक्ने । थारुलाई हाम्रो समाजले चाँहि यसरी बुझ्दो रहेछ । अनि मेरो आमाचाँहि ढुंगाना । मामु ब्राह्मण, पापा चौधरी । मैले त्यहीकारण ढुंगाना चौधरी लेखेँ । सामाजिक सञ्जालमा मैले यो नाम राखेपछि धेरैले के भन्नुभयो भने तिमीले चाँहि आफुलाई ब्राह्मण बनाउनका लागि ढुंगाना लेख्न थाल्यौ । तिमीलाई ब्राह्मण हुन मन रहेछ भनेर भन्न थाल्नुभयो । त्यो सुनेपछि चाँहि मैले आफैँले दुई समुदायलाई हेर्ने दृष्टिकोण कस्तो रहेछ भनेर आफैँले महसुस गर्न पाएँ ।
ब्राह्मण भनेको चाँहि ठूलो रहेछ, थारु भनेको चाँहि सानो रहेछ । यहाँ आफुलाई महान् बनाउन खाली एउटा थरमात्रै फेरे पनि पुग्नेरहेछ । र त्यही थरको कारणले हामी सानो हुने र हेपाईमा पर्ने रहेछौँ । विभेद कति रहेछ भन्ने कुरा यहीबाट पुष्टि हुन्छ ।
जातीय विभेद साझा मुद्धा बनाइनुपर्छ
जब मैले मेरो पूरा नाम भन्छु, त्यो परिचयसँगै विभेदका फेहरिस्त आउँछन् भन्ने लाग्छ । त्यो स्पष्ट सिँढीहरु भएको समाजमा म जन्मिएँ । मजन्मिँदा नै मेरो मानसिकतामा मैले त्यहाँ छुनुहुदैन, त्यहाँ जानुहुदैन । त्यो साथी र म बबराबर होइन भन्ने समाजमा बाँचे, हुर्किएँ । मैले धेरै विभेद त भुलिसकेँ । अर्थात् कतिपय कुरामा त मलाई विभेदनै लाग्दैनथ्यो होला । जबकि मैले कति धेरै विभेदका घटनाहरु भोगेँ हुँला ? काठमाडौं आइसकेपछि पनि कोठा नपाउनुका पीडाहरु, कयौँ त्यस्ता घटनाहरु छन् ।
यो दलित हो, यो सानो हो भन्ने खाले व्यवहार त मैले कति भोगेँ, कत्ति । यो त आमदृष्टिकोण छ भनेपछि मैले कति कति बेला विभेद भोगेँ भनेर मैले कसरी सुनाउने ? कति सुनाउने ? जातको प्रश्न मलाइ सबैभन्दा धेरै आउने गरेका छन् । एउटा त किन सपुत लेखेको ? किन थर लुकाएको ? किन जात लुकाएको ? किन विश्वकर्मा नलेखेको ? भनेर एकदमै धेरै प्रश्न आउँछन् । अर्को कुरा, जब विभेदका घटना हुन्छन्, त्यस्तो बेला पनि ममाथि प्रश्नहरु आउने गर्दछन् ।
जब रुकुमको घटना हुन्छ, जब रुपा सुनारहरु विभेदमा पर्छन् । त्यस्तो बेला मलाई जातको प्रश्न आइहाल्छ । मैले जतिसुकै इन्टरटेनिङ गीत संगीत गरुँ । तर मलाई जुनसुकै अन्तरवार्ता होस् वा अरु कुरामा जहाँ पनि मैले जातको प्रश्न खेपेको छु । यो जातको प्रश्न एकदमै धेरै आउने प्रश्न हो । तर, त्यही प्रश्न अर्को कुनै गैरदलित समुदायको कलाकारले किन खेप्नुपर्दैन ? किन सोधिदैन ? किन यसलाई साझा मुद्धा बनाइदैन ? भनेर प्रतिप्रश्न गर्ने गरेको छु । अब चाँहि यो साझा मुद्धा बनाइनुपर्छ । र यसलाई साझा बनाउनुपर्छ भनेर लागेको छु ।